बन्दमुक्त आन्दोलन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ फाल्गुन १, शुक्रबार ०५:१४ गते
‘आन्दोलनको कुरा गर्दा बन्द अपरिहार्य छ’, सर्वसाधारणले यसरी नै बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलहरुको मान्यता नै यही भएको छ । ‘बन्दलाई’ आयोजकहरुले आफ्नो अभियानको मह¤वपूर्ण हिस्साका रुपमा बुझे पनि नेपालमा यो गलत संस्कारको रुपमा देखा परेको छ । बन्दलाई आयोजकहरुले बाहेक अरु कसैले नरूचाउने कार्यक्रम हो । विडम्बना, बन्द नरूचे पनि आफूलाई अप्ठेरो पर्दा जसले पनि फ्याट्ट बन्द गर्न अगाडि सर्ने परिपाटी बसेको छ । जस्तै, राजनीतिक दलले गर्ने बन्दको व्यापारीहरुले ठूलो विरोध गर्छन् अनि व्यापार क्षेत्रमा केही समस्या परेमा व्यापारी पनि बन्द गर्न हिच्किचाउँदैनन् । बन्द भोग्नेहरु जहिल्यै पनि बन्दको सत्तोसराप गर्छन् । तर, उनीहरु पनि आयोजक भएर बन्द गर्न बेर लाग्दैन, अनि आफूले राखेको बन्दको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुन्छन् । बोलेरभन्दा पनि पेलेर औचित्य पुिष्ट गर्ने परिपाटी छ, सबैमा । बन्द संस्कार मौलाउन यसले ठूलो मलजल गरेको छ ।
जनतामा जागरण ल्याउने, चित्त नपरेका कुरामा विरोध गर्ने अनि समस्या परेमा सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्ने परिपाटी जहाँकहीँ हुन्छ । समस्याको निराकरण होस् भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनता, दल वा संघसंस्था जहाँ पनि हुन्छन् । तर, सबै खालका जागरण, विरोध र समस्याको निकासका लागि बन्द गर्ने प्रचलन नेपालमा बाहेक सायदै अन्यत्र छ । नेपालमा जस्तो चाँडो व्यवस्था परिवर्तन अन्यत्र कमै हुन्छ । ३० वर्षे एउटा युवाले एकदलीय पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्म बेहोरेको छ । अनि, पञ्चायत फाल्नलाई पनि बन्द नै भएको थियो, गणतन्त्र ल्याउने चरणसम्म पनि लामो बन्द बेहोर्नु परेको थियो । अर्थात् केहीलाई लाग्छ– बन्दले प्रजातन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्र ल्यायो, त्यसैले बन्दमार्फत जे पनि ल्याउन सकिन्छ । यसलाई अपनाऔँ र अंगीकार गरौँ ।
‘किन बन्द गरेको ?’ भनेर कसैले प्रतिवाद गरेमा १९ दिने लामो आन्दोलन बेहोरेको हैन र, आज एक दिन अथवा एक क्षणको बन्द सहन नसक्ने ? भनेर हपार्ने गर्छन्, आयोजकहरु । प्राजतन्त्र र परिवारको झगडामा गरिने बन्दको औचित्य एकै भएजसरी आउँछन्, आयोजकहरु । नेपालमा पार्टीहरुको कुरा गर्दा सबै बन्दको खिलापमा देखिन्छन् । तर, बन्द गर्न पनि सबै तम्सन्छन् । हामीले ल्याएको प्रजातन्त्रमा बन्द गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो भन्छन् दलका कार्यकर्ताहरु । बन्द गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यसका पनि निश्चित प्रकृया र मान्यताहरु छन् भन्ने ख्याल कसैले राख्दैनन् । अझ राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने बन्द कार्यक्रम विरोध अभियानको अन्तिम हतियार हो । अनि, आयोजकहरुले बन्द आह्वान्सम्म गर्न सक्ने हुन्, त्यसलाई मान्ने वा नमान्ने अधिकार सर्वसाधारणसँग सुरक्षित रहन्छ । लौ भन्नू, के यसरी बन्द आयोजना हुने गरेको छ त नेपालमा ?
सुरूमै बन्द राख्न उद्यत हुन्छन् सबै, चाहे ती दलहरु हुन् वा जनस्तरमा काम गर्ने संगठित संरचनाहरु हुन् । बन्द माग पूरा गर्ने कडीका रुपमा नभएर मागका बारेमा प्रचार गर्ने माध्यमका रुपमा अत्यधिक उपयोग हुन थालेको छ । ‘हैन आज बन्द रहेछ, कसले केका लागि बन्द गरेछन्’ भनेर जनसाधारणमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि बन्द गरिन्छ अचेल । मुख्य भनिने दलका ठूलै नेताहरुले अचेल भन्न थालेका छन्– ‘हाम्रा एजेन्डा र मान्यताहरुलाई जनसाधारणसमक्ष पु¥याउन पनि बन्द अपरिहार्य छ ।’ अर्थात्, विरोधको अन्तिम कडी मानिने बन्द प्रारम्भिक बिन्दुमा समेत उपयोग हुन थालेको छ । यसका दुष्प्रभाव के हुन थाल्यो भने बन्दको अत्यधिक प्रयोग बढेर गयो । अत्यधिक प्रयोग भएपछि जसले पनि बन्द राख्न थाले । उसले ग¥यो, हामीले पनि बन्द गरौँ भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।
अनि, अर्को मह¤वपूर्ण पक्ष के हो भने राजनीतिक दल, उनीहरुका भातृ संगठन वा अरु जोकोहीलाई पनि बन्दको आह्वान्सम्म गर्ने छूट हो । तर, बन्द आयोजकहरुले आह्वान् मात्रै गर्दैनन्, जबर्जस्ती बन्द गराउँछन् । बन्द आह्वान् गरेपछि त्यसलाई मान्ने वा नमान्ने जनताको अधिकार हो । यो कुरा राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेनन् । बन्द नमान्नेहरुलाई तर्साएर बन्द गराउने परिपाटी छ । बन्दका दिन खुला भएका पसल तोडफोड हुन्छ, गाडीमा आगजनी हुन्छ । जनताका लागि बन्द गरेको हो भन्नेले जनताले प्रयोग गर्ने सम्पत्तिमाथि आगो लगाउँछन्, बन्दका दिन । यदि राजनीतिमा संस्कार हुँदो हो त यसरी अर्थात् डर, त्रास र आतंक देखाएर बन्द गर्न मिल्दैन । तर, नेपालमा प्रत्येक बन्द यसरी नै हुन्छन् । त्यसैले, बन्दलाई राजनीतिक कुसंस्कार भन्दा अन्यथा नहोला ।
बन्द यी हिसाबले मात्रै अनुपयुक्त होइन, देशको अर्थतन्त्रका लागि बन्द घातक हो । अर्थतन्त्र देश विकासको मेरूदण्ड हो । एक दिन बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । राजनीतिक एजेन्डा र अन्य खालका मुद्दामा देशका लागि कति हितकर वा अहितकर छ, खुला बहस हुनुपर्ने हो । समस्या निराकरणका लागि गरेको बन्दले अरु समस्या के–के थप्ने हो, विचारविमर्श गर्नुपर्ने हो । तर, सबै राजनीतिक मुद्दा र सबै खालका समस्या निराकरणका लागि आर्थिक उन्नतिमा बाधक बन्दलाई अंगीकार गर्दा देश थला पर्छ । राजनीतिक राम्रो भए सबै राम्रो हुन्छ भनेर बन्दले पर्ने असरलाई कम आँक्ने गरिन्छ । तर, बन्दका लागि उठाएको राजनीतिक मुद्दाले देशलाई हित नै गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा वा अन्य विषय देशका लागि अत्यन्त मह¤वपूर्ण छ भन्ने औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै बन्द आह्वान् गर्ने परिपाटी हाम्रोमा बसेन । आफूले बोकेका हर राजनीतिक एजेन्डा मह¤वपूर्ण छन् भन्ने सबै पार्टीलाई लाग्छ । अनि, राजनीतिक मुद्दा उठाएर गरिने बन्द पनि आह्वान्मा सीमित छैन । जबर्जस्ती नै बन्द गरिन्छ । आह्वान् गरेर त्यसलाई पालना गर्ने वा नगर्ने जिम्मा जनसाधारणमा छाड्ने राजनीतिक संस्कार बस्यो भने त्यो बल्ल मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो । जबर्जस्ती गर्ने बन्दका विरूद्ध सशक्त आवाज नउठ्दासम्म दलहरुले त्यो कदम अंगीकार गर्ने सम्भावना छैन ।
दल वा आयोजकहरु बन्दको आह्वान्सम्म गर्ने, पालन गर्ने वा नगर्ने जनताले निर्णय लिने परिपाटी बसेमा राजनीतिक दललाई बन्दको औचित्य पुष्टि गर्न निकै मेहेनत गर्नुपर्छ । जनताका दैलोदैलोमा गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । सवाल–जवाफ गर्नुपर्छ । हाम्रा दलहरु यसो गर्न अल्छी गर्छन् । अनि, आतंकको छायामा बन्द सफल गराउने परिपाटी अपनाएका छन् । यसरी आतंकको आवरणमा भएको बन्दले सरकारलाई कति दबाब देला ? लौ, दबाबै दिएर पनि परिवर्तन भयो भने त्यसरी संस्कारबिना आएको परिवर्तनले देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? नेताहरुले सोचेका छैनन् । उनीहरुलाई लाग्छ, आन्दोलन भनेको नै बन्द हो र बन्द नभएसम्म आन्दोलन नै हुँदैन । तर, बन्दले वाक्कदिक्क बनाएको छ । विकल्प नखोजे जनताले परिआउँदा बदला लिनेछन्, त्यस्तासँग ।